Ma taqaan hadallada haweenka xusuusta ku reeba? - Caasimada Online
Home Warar Ma taqaan hadallada haweenka xusuusta ku reeba?
Ma taqaan hadallada haweenka xusuusta ku reeba?
‘Waan ku jeclahay’ sadaxddan eray waa kuwa kaliya oo aysan dhagaheeda ka daalin inay maqlaan,inkastoo ay ogtahay inaad jeceshay suurtagalna aysan aheyn inaad noolaato la”aanteed hadana ku celcelintooda waxay dareensiiyaan reyreyn gaar ah.
‘Waxaan jeclahay cumrigeyga inta ka dhiman inaan adiga kula qaato’
‘Waligeey kuma qiyaanaayo’
‘Waad quruxbadantahay’ macnaha ma aha kaliya inay muuqal ahaan qurxoontahay waxay koloo muujineysaa in nafsiyan ay tahay mid quruxbadan.
‘Waxaad tahay qofkii ugu quruxda badnaa ee aan waligey dhaayo saaro’
‘Waan nasiibbadanahay maxaayeelay adiga ayaan ku helay’
‘Saaxiibaddaa waad ka qurux badantahay’
‘Kuma iloobidoono gacaliso’
‘Waan boogaadinayaa waxkasta oo aad ii sameyso’
‘Aduunka oo dhan ayaad ii tahay’ ayada oo og inaad muhiim u tahay hadana markii ay erayadaan kaa maqasho waxay dareentaa farxad gaar ah.
‘Waxaad i dhameystirtay’
‘Aniga ayaa ku leh’
‘Cuntada ugu macaan ayaad karintaqaanaa’
‘Nolasheyda Ayaad badashay’
‘Indhahaaga waan ka helaa’
‘Maxaad isleedahay macaanto’
‘Yaab ayaad leedahay’
‘La’aantaa waxaan ahay wax aan jirin’